Dowlada Norway: Hala joojiyo tarxiilka dadka sharci la´aan wadanka ku ahaa mudada dheer. - NorSom News
Dowlada Norway: Hala joojiyo tarxiilka dadka sharci la´aan wadanka ku ahaa mudada dheer.
Wasiirada cadaalada Norway
Wasiiradda cadaalada Norway Monica Mælend ayaa laamaha soo galootiga ku wargalisay in ilaa amar danbe ay joojiyaan tarxiilka dadka qoxootiga ah ee diidmada ka heystay codsiga magangalyada, wadankana mudo dheer ku noolaa.
Wasaaradda cadaalada Norway ayaa shaley baarlamaanka u dirtay hindise sharciyeed isbadal loogu sameynayo xeerka soo galootiga, si dadka mudada dheer wadanka sharci la´aanta ku ahaa loo siiyo sharci dal kujoog rasmi ah. Halkan ka akhri hindise sharciyeedka dowlada.
Wasiirada cadaalada ayaa booliska iyo hey´addaha kale ee soo galootiga ku amartay inay joojiyaan tarxiilka dadka mudada dheer joogay, ilaa uu baarlamaanku ka fariisanayo dhageysiga soo jeedinta dowlada.
Wasiirada cadaalada ayaa sheegtay in hadii dadkaas la giiyo sharci magangalyo ay faa´iido weyn ugu jirto qofka iyo wadankaba, maadaama uu qofku heli doono fursad uu ku shaqeysto, ama uu naftiisa ku dabaro.
Dadkan ayay dowladu rabtaa in fursad la siiyo.
Sida ku xusan soo jeedinta dowlada, waxey wasaarada cadaaladu rabtaa in fursad magangalyo la siiyo dadka da´doodu iyo mudada ay wadanka joogeen, ay isku dar gaareyso 65 sano.
Tusaale ahaan, hadii qofku uu jiray 47 sano markii uu Norway soo galay uuna wadanka ku noolaa 18-kii sano ee ugu danbeeyay, waxuu buuxin karaa shardigaas, maadaama da´diisa iyo mudada uu wadanka joogay ay isku dar gaareyso 65 sano.
Ama hadii uu qofku jiray 35 sano markii uu Norway soo galay, uuna sharci la´aan ku noolaa 30 sano, waxaad buuxin kartaa shardigaas.
Soo jeedinta la xiriirta in dadka mudada dheer wadanka joogay la siiyo fursad magangalyo, ayaa ka bilaabatay kiis haweenay 63 sano jir ah, una dhalatay dalka Ethiopia, taas oo wadanka ku nooleyd 18-kii sano ee ugu danbeeyay. Isbuucii hore ayaa haweeneydan la dhigay xabsiga Trandum ee qoxootiga, kaas oo lagu xareeyo dadka la tarxiiliyo.
Xigasho/kilde: Politiet stanser utsending av asylsøkere med lang oppholdstid inntil videre.
Previous articleGermany: 9-ka qof ee la toogtay waxay ahaayeen ajaaniib ku jirtay baar shiishada lagu cabo.
Next articleTroms: Guri islaameed ayay gashay saqdii dhexe, kadibna dab qabadsiisay.
Telemark: Booliska oo toogasho ku dilay qof.
Norway: 90% Dad u dhintay Corona, arintan ayay wadaageen.
Norway oo dhimi karto deeqaha ay siiso wadamada dibadda.
Keydka NorSom Velg måned september 2020 (43) august 2020 (82) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (61) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (39) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)